Famerenana amin'ny laoniny ny mailaka: Toetoetra 6 mila mieritreritra indray | Martech Zone
Famerenana amin'ny laoniny ny mailaka: Toetoetra 6 mila eritreretina indray
Alakamisy Oktobra Oktobra 8, 2015 Alakamisy Oktobra Oktobra 8, 2015 Richard Smullen
Miankina amin'izay anontanianao, ny mailaka dia teo anelanelan'ny 30 sy 40 taona. Mazava ny hasiny, miaraka amin'ireo fampiharana manerana ny lafiny sosialy sy matihanina amin'ny fiainana. Ny hita koa anefa dia ny teknolojia mailaka lany andro. Amin'ny lafiny maro, averina alefa ny mailaka mba hijanona ho manan-danja hatrany amin'ny filan'ny mpampiasa ankehitriny.
Fa isaky ny inona no azonao atao ny mifampiresaka zavatra alohan'ny hiainanao fa efa lasa ny fotoana? Rehefa manomboka mandinika ny fandrika ateraky ny mailaka ianao ary mamantatra ireo faritra hatsaraina, manomboka mahatsapa ianao fa hafa tokoa ny "mailaka 2.0" raha naorina sy natomboka androany. Inona avy ireo fiasa tokony hampidirina na hatsaraina? Ary inona no hajanona? Mety hametraka amin'ny fampiharana hafa ve ny endriny vaovao?
Raha te hamerina handefa mailaka isika anio, ireto misy fototra enina izay ho toy ny sehatra mailaka vaovao. Tsy haiko ny momba anao, fa raha afaka mampiasa an'ity rafitra ity aho dia ho toby iray sambatra sy mahomby kokoa…
Tsy misy adiresy mailaka intsony
Misafotofoto tanteraka ny boatin-tsofinay. Raha ny marina, araka ny Radicati Group, 84% amin'ny mailaka voaray androany no spam. Satria tsotra kely ity: misokatra ny adiresy mailaka. Ny hany ilainao dia ny adiresy mailakao sy ny 'voila' - ao anaty boaty mailakao izy ireo. Ao amin'ny E-mail 2.0, dia hisy rafitra mifototra amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana izay manana famantarana tokana. Ary ity mpamaritra ity dia hijanona tsy miankina amin'ny laharana finday iray.
Raha vantany vao azontsika tsara ny fomba 'identification' sy ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa, dia afaka manala ny boaty fampidirana isika. Ie, ny boaty. Ny mailaka 2.0 dia tsara kokoa hanompoana ny orinasa sy ny mpanjifa raha toa ny 'fifampiresahana' na ny kofehin'ny hafatra tsirairay manalavitra karazana siny 'tratra' rehetra, na ny boaty. Ny fantsom-pifandraisana mivantana eo anelanelan'ny orinasa sy ny mpihaino azy dia ho fanatsarana ankasitrahana.
Fifandraisana azo antoka
Ny toetoetran'ny adiresy mailaka sy ny habaky ny spam dia midika koa fa lasa zatra viriosy, fikasana phishing ary scam isika. Raha tsy misy ny tsy fivadihana, dia voarara ny zavatra hafa azo atao amin'ny 'famerenana amin'ny laoniny'. Noho izany, amin'ny mailaka 2.0, izahay dia te-hahafahana mandoa faktiora, manasonia antontan-taratasy tsiambaratelo ary manendry ny fananana ara-tsaina. Tsy maintsy hitranga izany raha toa ka misy fantsona azo antoka sy voahodina voasokatra teo anelanelan'ny mpandefa sy ny mpandray ka miantoka ny tsy fandavana azy.
Fifandraisana ara-potoana miaraka amin'ny fandraisana andraikitra
Rehefa mandefa mailaka ianao, inona no mitranga amin'izany? Trash ve izany, tratran'ny sivana spam, vakiana, tsy jerena? Ny marina dia; tsy hainao. Amin'ny alàlan'ny e-mail 2.0, ny fandraisana andraikitra sy ny fanaovana tatitra dia ho eo aloha sy afovoany. Tahaka ny fiasan'ny fandefasan-kafatra, ny mailaka ataontsika amin'ny ho avy dia hiorina amin'ny mpitondra hafatra ary hampirisika ny fifandraisana mivantana amin'ny fotoana tena izy. Mandrosoa foana ary mahomby foana.
Ny firoboroboan'ny finday haingana dia manondro fa mety ho fotoana ho an'ny sehatra iray izay natao hiorina amin'ny eritreritra fotsiny ny fampiasana finday. Mandeha haingana be kokoa ny fiainana noho ny tamin'ny 30 taona lasa ary miaraka amin'izany, lasa ireo mailaka lava sy sary HTML mahafinaritra izay tsy misy ilana azy. Aleon'ny olona mifampiresaka amin'ny fampiasana teny vitsivitsy fotsiny, mazàna amin'ny alàlan'ny sehatra fifampiresahana. Ka ny mailaka 2.0 dia mila miantoka fifandraisana tsara kokoa; fohy, ara-potoana ary natao hovakiana amin'ny telefaona finday na aiza na aiza misy azy eto amin'izao tontolo izao.
Na dia mety manondro zavatra betsaka amin'ny fiainantsika aza io resaka manokana io dia ireo rakitra izay mifamatotra amin'ny mailaka nalefa taminay. Ny amerikanina antonony dia mandany enina minitra isan'andro hitady ny arofenitra sy rakitra. Midika ho telo andro tsy namokatra io isan-taona. Ny mailaka 2.0 dia tsy isalasalana fa hahafantatra izay firaketana azontsika ary hitantana azy ireo mifanaraka amin'izany. Ataovy ao ity rakitra iray ity, afindrao eto izy. Saino ity mba handoavana sns.
Tags: mailakaadiresy mailakamail attachmentfamolavolana mailakafivezivezena amin'ny mailaka
Richard Smullen no CEO an'ny Pypestream. Niasa ho mpiara-manorina sy tale jeneralin'ny Genesis Media LLC izy, haino aman-jery marobe, sehatra fanaovana dokambarotra amin'ny fotoana tena izy.
Ahoana ny fandrefesana ny fahombiazan'ny media sosialy
Samy mankahala ny dokam-barotra ny rehetra… Mbola mandeha ve ny dokam-barotra aloa?